Soosaarayaasha & Shirkadaha Iftiiminta Muuqaalka Muuqaalka - Shiinaha Warshad Iftiiminta Muuqaalka
Ku Iibinta Qiimaha Xayeysiinta ugu Wanaagsan ee Mobile App Control Led Strip Light Light Waterproof
Nalalka LED-ka ee loogu talagalay qolka jiifka Midabbada ayaa muhiim u ah horumarka maskaxda carruurta maadaama cilmi baaris la sameeyay ay tilmaamayso in midabada ay door muhiim ah ka ciyaaraan carruurta IQ, EQ iyo shakhsiyadda. Qurxinta qolka Aragtida cilmu-nafsiga waxay cadeyneysaa in midabadu saameyn weyn ku leeyihiin horumarka shucuurta dadka. Midabada kaladuwan waxay dadka siisaa dareemo nafsiyeed oo kaladuwan waxayna saameyn kaladuwan ku leedahay caafimaadka dadka. Qurxinta Qurxinta Naqshadee iftiinka midabkaaga oo kuu oggolow inay kuu keento niyad farxad leh oo ay kaa dajiso daalka ...
Tayada Sare ee Ilaalinta Tamarta Waxsoosaarka iyo Ilaalinta Deegaanka ee Laydhka Nalalka Nalalka biyuhu
Xaraashka nalalka dhaadheer ee dhaadheer ee loo yaqaan 'Cozylady', oo ah warshaddii ugu horreysay ee ku guuleysata horumar farsamo ee 12v xarig oo ka sarreeya 15m, oo ku habboon qurxinta qoyska. Waxaan haynaa 20 sano oo khibrad casri ah u leh qaabeynta wax soo saarka iyo soo saarista. Hadafkeenu waa hal-abuurnimo iyo tayo sare leh. Wax soo saarkayagu waxay soo mareen nidaamyo kormeer badan ka hor intaanay ka bixin warshadda si loo hubiyo heerarka tayada iyo amniga ee qancintaada iyo kalsoonidaada. Wifi light strip's gaar ah fe ...
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Tayada Sare ee Kumbuyuutarka Kumbuyuutarka ee Kala Fog On On Iyo Off Profile Light Led Strip
Strip Fiilooyinka LED-ka ayaa dhici doona?】 Marka loo eego jawaab celinta macaamiisha, waxaan dhowaan sameynay isbeddelo muhiim ah - cusbooneysiinta kuleylka kuleylka ee kuleylka. Maaddaama waqtiga la isticmaalayo uu kordho, isfahamku wuu kordhaa. Laakiin si kasta oo ay koolladu ufiican tahay, 20m light light waxay ka badantahay cabirka iyo culeyska caadiga ah, marka waxaan diyaarinaa qalab xoojin ah si aan u xallino dhibaatada laydhka khafiifka ah ee dhaca. Balankeenna: Haddii aad u baahan tahay qalab dheeri ah oo dheeri ah oo 3M ah, fadlan la xiriir adeegga macaamiishayada. 【...
Warshadda Tooska ah ee Iibinta Tayada Sare waxay Taageertaa Moobillo Moobillo Badan Xakameeya Bluetooth Led Strip Light
Ku habeyn muusig Muusig Fantastic, makarafoon xasaasi ah oo lagu dhex dhisay, midabada si otomaatig ah ayey isu beddelaan iyadoo lagu saleynayo garaaca muusikada / dhawaqa jawiga. Ka bilaabida xaflada muusikada nalalka xargaha. Waxay u abuuri kartaa jawi jacayl, qurux badan, xiiso leh, jawi sixir ah xafladdaada. Tani waxay ka dhigeysaa waqtigaaga xafladda xusuus. Ku raaxayso bandhiggaaga xafladaha leh malaayiin midabo ah. Codsi Ballaaran Nalalka xariijimaha aan biyuhu karin waxaa loogu talagalay qurxinta gudaha iyo dibedda. Waxaa si fudud loo isticmaali karaa meel kasta, hel ...
Iibinta Qiimaha Xayeysiinta ee ugu Fiican Mobile Mobile Control Remote On iyo Off Lights Lights Strip Lights
Smareal 50FT / 15M LED Strip Lights wuxuu kuu keenayaa iidaada muuqaalka ah Noloshu waxay ubaahantahay dareen dhaqan, laydhadh midab leh ayaa noloshaada ka dhigaya mid isku mid ah oo xiiso leh. waad u badali kartaa qolka qaabab kala duwan. Aan gebi ahaanba iskudarsano diiran, raaxo leh. Nalalka laydhku waxay ku habboon yihiin jikada, qolalka jiifka, iftiinka telefishanka ， ciidaha, ama dhacdooyinka qoyska.Waa hadiyad aad u fiican qoyskaaga iyo asxaabtaada. Xusuusta iyo Saacadda Waxqabadka iftiinka iftiinka iftiinka LED waxay leeyihiin shaqo xusuus ah, waxay xasuusan kartaa qaabkii aad horey u dejisay.
Waxsoosaarka Tayada Sare ee Kumbuyuutarka Kumbuyuutarka ee Kumbuyuutarka iyo Khadka Laydhka Laydhka Xakamaynta Fog
Waqtiga Led Strips, Waad hagaajin kartaa laydhka sifeynta si ay ugu habboonaato meelaha kala duwan, Nalalka xargaha ee laydhku waxay leeyihiin shaqo xasuus ah, markii xariijimaha mar labaad la isticmaalo, waxay xasuustaan ​​habayntii ugu dambaysay iyadoon dib loo dejin, iyadoo la adeegsanayo App-ka casriga ah, waad la kulmi kartaa shaqeynta waqtiga, si toos ah u daar oo damso waqtiga hore, 28 Hababka Dynamic waa la dooran karaa, waxaad sidoo kale Diy kartaa midabkaaga gaarka ah Muuqaallo badan oo la heli karo, Led strip ayaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo qolkaaga Cunnada, Qolka Jiifka, Jaranjarada, Co. ..
Qiimo Wanaagsan Ilaalinta Tamarta Tayada Wanaagsan Iyo Ilaalinta Deegaanka ee Wifi Strip Light
Iftiimi koone walba si sahal ah ha ku gaarto meelkasta oo gurigaaga ah oo ku yaal xarig khafiifa 32.8ft. Iftiimi qolal badan hal mar. Marnaba ha u baahnayn inaad ku dhex dhex dhuumato waxyaabaha aad rabto mugdiga. Habka Muusigga ee La Kobciyay Isku xidho iftiinkaaga iftiinka 'Alexa LED' oo leh muusig aad jeceshahay oo waayo-aragnimo dhagaysi midabo badan leh Ku noolow xafladda qaab firfircoon oo firfircoon ama kor u qaad jilicsanaantaada, miyuusigga nasashada leh ee xaaladda deggan. Cunitaanka Ambiance Cozy dabacsanaan sare waxay ka dhigeysaa neecaw dejinta geeska. Cunto wanaagsan iyo f ...
Qiimo Wanaagsan App Tayo Wanaagsan Casriyeynta Led Strip Light Fudud
Ikhtiyaarrada Xakamaynta Triple: Ku maaree nalalkaaga xariiqa lebbiska casriga ah barnaamijka 'Govee Home app', qalabka kontoroolka fog, ama sanduuqa xakamaynta. Barnaamijka Govee Home wuxuu sidoo kale ku siinayaa inaad hesho in ka badan 16 milyan oo midabo, 64 qaababka muuqaalka, iyo astaamo intaa ka sii badan. Habka Muusigga Oo La Kobciyay: Mahadsanid makarafoonka lagu dhex-dhisay, aadna xasaasi u ah, waxaad iskula jaan qaadi kartaa noocyada muusikada ee kala duwan nalalka qalabka muusiga ee 'LED'. Kula noolow xafladahaaga qaab firfircoon ama si fudud ugu dabacsan hab deggan. Aqoonsiga Midabka Smart: Muuqaalka midabka xariifka ah wuxuu kuu ogolaanayaa ...
Iibinta Tooska ah ee Warshadda Shaqeynta Waqtiga Tayada Sare ee Smart Layd Strip
Cunitaanka jawiga raaxada leh ee 16.4 cagood waxay ku habboon tahay qurxinta miiska jikadaada. Cunto wanaagsan iyo khamri wanaagsan ku cun jawiga nasashada. Qurxiso qolka jiifka dhalaalkiisa la hagaajin karo iyo midabbo badan ayaa kuu suurta gelinaya inaad diyo sidaad jeceshahay. Iftiiminta iftiinka oo deji midab aad ugu jeceshahay kontoroolka fog ama barnaamijka guriga Govee. Ku raaxayso waqtigaaga si xor ah. Waqtiga xafladda Daar muusikada markii xafladdaadu bilaabmayso. Qoob-ka-ciyaarka asxaabtaada qaabab firfircoon ama deggan oo midabyo iftiin firfircoon leh. Caawinta Codka Habboon: Awood kuu ...
Iibinta Qiimaha Xayeysiinta ee ugu Fiican Waxay Taageertaa Xakamaynta Taleefoonada Gacanta ee Badan Led Rgb Strip Light
Seddex Kontarool: Ku xakamee nalalkaaga LED-ga barnaamijka Govee Home, ka fog, ama sanduuqa xakamaynta. Iyada oo ku xirnaanta xiriirka Bluetooth, waad beddeli kartaa midabada, waad shidi kartaa nalka / shidan, ama waxaad ku hagaajin kartaa dhalaalka 10m / 32.8ft inta u dhexeysa. Iftiiminta Muusikadaada: Mikriinka xaraashka ah ee gudaha ku dhex jira, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la mid dhigto laydhadhka 'LED' muusikada aad jeceshahay. Sameynta xaflad dhammaadka usbuuca Ku jaji nalalka midabbada beddelaya ee qoob ka ciyaarka laxanka hees kasta. Habee Iftiinkaaga: Qaabka DIY, v ...
Iibinta Ugu Fiican Iibinta Tamarta Qiimaha Xayeysiinta Iyo Ilaalinta Deegaanka Nalalka Smart Led Strip
16.4ft Rgb Led Strip Light SMD: 5050 150 leds Midab: RGB 5050 DIY Length: 1 * 5meters / 1 * 16.4ft Biyo La'aan: Maya SGS US Shahaadada Cusbooneysiinta 24 Furaha Xakamaynta IR Muhiimka ah Maamulaha 24 furayaasha fogaanta fogaanta IR: <8M ( Waa inuu ku foognaadaa halka loo yaqaan 'Mini receiver' oo aan lahayn wax carqalad ah) 12V Soo-galinta Badbaadiyaha Badbaadada: Soo-saarka 100-240V: Soo-saaridda DC12V / 2A UL & FCC 5050 Midabbada DIY Waxqabadka Midab beddelidda laydhadhka laydhka leh oo si khaas ah loo naqshadeeyey R / G / B isku-darka isku-darka, Waxay si weyn u taageertaa 5050 DIY midab. Goorma ...
Qiimo Wanaagsan Ilaalinta Tamarta Tayada Wanaagsan Iyo Ilaalinta Deegaanka Fudud Laydhka Laydhka Aan Biyuhu Gaadhin
Dhamaan badeecadeena waxaa qaabeeyay kooxdayada horumarinta waxaanan leenahay warshad gaar ah. Waxaan higsaneynaa inaan siino alaab tayo leh iyo khibrada ugu wanaagsan ee wax soo iibsiga macaamiisha. Qalabkan RGB LED Strip waa badeecadeenna cusub, waxay leedahay barnaamij-dejiye koodhjebiye u gaar ah. Waxay la timid midabbada 4096 DIY, 16 heerar dhalaalaya oo la hagaajin karo iyo 6 qaab dhalaalaya oo firfircoon. Maxaa intaa ka sii badan, Habka jiifka, oo aad u qaabeysan rinjigan rgb, markaad riixdo badhanka qaabka hurdada, nalka turnto light orange oo kaa caawin kara sl ...